Ngathi | I-Hangzhou Dro Textile Co, Ltd.
I-Hangzhou Dro Textile Co, Ltd.yinkampani eyolukiweyo yendwangu edibanisa imveliso kunye norhwebo. Sineqela elinamava kunye nelinezakhono. Singaphezulu kwe-5,5Iindidi zeepateni ezingama-00 ezikhoyo zabathengi ukuba bazikhethe（ iipateni ezinombala kunye nezishicilelweyo） ukusuka kunye nenani lepatheni ukukhula ngeqondo le-15% ngonyaka. Ngomgangatho wethu obalaseleyo kunye nokusebenza okuphezulu, kunye nokukwazi okunamandla ukwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi nganye Inobutyebi bamava kurhwebo lwangaphandle lwelaphu kwaye inegama elihle kushishino.
Senza iintlobo ngeentlobo zeemveliso ngokungqinelana neemfuno zabathengi abahlukeneyo.Imveliso yethu iphawulwe ngezinto ezinjengokungangeni manzi, ukuthintela umlilo, kunye nokungena komphunga wamanzi, ukungena komoya, kwaye zichasene no-static, anti-static, kunye ne-anti-ultraviolet. Ngoluhlu olubanzi lwezicelo, iimveliso zethu zinokwenziwa zibe yimingxunya, izembozo zesikhephe, iiambrela zelanga, ifenitshala yegadi, iintente kunye neebhegi.
Ukukhawuleza kombala okuqaqambileyo
Umbala oqinileyo wokukhawuleza kwimozulu. Amanye amalaphu ukuba abonakaliswe kukukhanya kwelanga ixesha elide aya kuphelelwa okanye aphulukane nobungakanani bombala.
Uluhlu olubanzi lweMibala kunye noYilo
Wonke umntu unokhetho olwahlukileyo kunye nokukhetha imibala eyahlukeneyo. Ke ngoko, kuyilo olwahlukeneyo kunye nemibala iphehlelelwe o kwimarike ukuze ihambelane neemfuno zakho.
Ukuxhathisa kumonakalo we-UV kunye nokuphela.I -DRO isebenza ngokubamba iiarhente zokuthintela i-ultraviolet ezikhusela umqolo wepolymer welaphu kwimpembelelo yemitha ye-UV. Ke ngoko njengelaphu langaphandle, i-DRO ibonakalisiwe ukuba inesakhono esomeleleyo sokumelana nefuthe lokukhanya kwelanga ixesha elide, umoya, imvula kunye nokufuma. Ihlala ixesha elide.